Hormones vehivavy mpanodina mpanodina mpanodina - AASraw vovoka
/ Products / Hormone vehivavy
We are female hormones suppliers of powder, Female Hormones powder for sale, As we promised, all our Hormones Female Hormone powder is with pure not less than 98%.
Hormones vehivavy vovoka
Ny hormones dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy. Ny hormones ho an'ny vehivavy, estrogen ary progesterone, dia fanta-daza indrindra noho ny fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny fahasalamana ho an'ny vehivavy, manomboka amin'ny fikarakarana ny fotoana maha-bevohoka amin'ny taona sy ny maro hafa. Fa ny vatanao koa dia mahatonga sy mampiasa karazana hormones hafa izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao hafa-avy amin'ny herinao, ny lanja, ny fihetsehampo ary ny maro hafa. Ny fiovana maro nandritra ireo taona nitarika ny menopause (perimenopause) dia vokatry ny fiovaovan'ny hormones vokarina avy amin'ny ovy, indrindra indrindra ny estrogen.
Efa ela no nieritreritra fa ity fivelarana ny zaza vao teraka ity dia vokatry ny hormones vehivavy vovobony (oestrogens) ao amin'ny vatan'ny reny mandalo amin'ny placenta mandritra ny fitondrana vohoka ary mampitombo ny fivoaran'ny tratra ao amin'ny zaza.
Ny hormones manan-danja indrindra ataon'ny ovy dia fantatra amin'ny hoe hormones (firaisana ara-nofo) amin'ny firaisana ara-nofo (sex steroids) - ary ireo maina roa dia estrogen sy progesterone. Ny oviana koa dia mamoaka ny sasany amin'ny hormone lahy, testosterone.
Mandritra ny fahamaotiana, ny estrogen dia manatsara ny fivoaran'ny tratra ary mahatonga ny vava, ny uterus (kibo) sy ny tavoahangy Fallopian (izay mitondra atody hatrany am-bohoka) mba hahazoana matotra.
Izy io koa dia mandray andraikitra amin'ny fandrosoana eo amin'ny fitomboany ary manatsara ny fizarana ny tavy eo amin'ny vatan'ny tovovavy iray, izay matetika miteraka kokoa ny fametrahana azy eo amin'ny andilany, ny rambony ary ny feny. Ny Testosterone dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny hozatry ny taola sy ny taolana.
Estrogen. Ny hormona voalohany amin'ny "hena" dia manatsara ny fitomboana sy ny fahasalaman'ny taovan'ny zaza fanabeazana ary manakana ny vovoka maina, elastika (mivoatra), ary tsara amin'ny rà. Ny fihenan'ny estrogen amin'ny ankapobeny dia mihena mandritra ny perimenopause, saingy manao izany amin'ny fomba tsy ara-dalàna izy ireo. Indraindray dia mety hisy estrogen fanampiny mandritra ny perimenopause noho ny teo aloha.
Ankoatr'ireo estrogen, ny hormones hafa novokarin'ny hormones-progesterone (hormone vavy hafa) ary testosterone (hormone lahy androgen izay novolavolain'ny vehivavy) - dia niova koa nandritra ny taona niainanao, araka izay hazavaina ao amin'ny tabilao etsy ambany.
Ny fihenan'ny fihenan'ny progesterone dia miantraika amin'ny fotoana maha-ratsa-danja kokoa noho ny fiantraikany eo amin'ny firaisana ara-nofo, fa ny fihenan'ny taona mifandray amin'ny testosterone dia mety hanimba ny libido (fiara fitondra-tena) amin'ny vehivavy midevokely, na dia mbola miteraka adihevitra aza izany. Ny fihenan'ny estrogen mihoatra noho ny testosterone dia mitarika ny sasany hino fa tsy tokony hianjera any amin'ny menopause ny libido. Ny fihenan'ny testosterone amin'ny vehivavy dia mifandraika amin'ny taona, fa tsy mifandray amin'ny menopause, ary manomboka taona maromaro talohan'izay.
Estradiol (E2), koa voatonona oestradiol, dia hormone steroid estrogen sy ny hormone vehivavy vavy. Izy io dia tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny fepetra famonoan-taolana sy ratsin'ny taovam-pananahana. Ny paompy estradiol dia tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny toetry ny firaisana ara-nofo faharoa, toy ny nono, fihenam-bolo, ary ny fatran'ny vehivavy miteraka fatra amin'ny vehivavy ary manan-danja amin'ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ny fiterahana amin'ny fiterahana toy ny trondro madinika, , ary vagy nandritra ny fahamaotiana, ny olon-dehibe ary ny bevohoka. Manana fiantraikany lehibe amin'ny teboka maro hafa koa izy io, anisan'izany ny taolana, ny matavy, ny hoditra, ny atiny ary ny atidoha.
Ny AASraw dia manolotra indrindra ny vovo-dronono estradiol, bozakaat, estradiol powders, estradiol poids valerate, etil estradiol poids, sns. Izy rehetra dia azo antoka ho amin'ny fahadiovana, ny hatsaratsarana ary ny fiorenana maharitra.
Maneho 1-8 ny 20 vokatra
Delidinone Acetate vovoka